Iran: Niteraka Fanehoan-kevitra Maro i Hillary Clinton · Global Voices teny Malagasy
Iran: Niteraka Fanehoan-kevitra Maro i Hillary Clinton
Voadika ny 08 Novambra 2011 7:34 GMT
Ny fanamarihana nataon'i Hillary Clinton tamin'ny fanadihadiana iray tamin'ny BBC ny 26 Oktobra 2011, nilaza fa ny Hetsika Maitso dia tsara mitady fanampiana avy any ivelany, dia niteraka fanehoan-kevitra maro – anisan'izany teo anivon'ireo endrika diso fantatra loatra amin'ny Hetsika Maitso sy ireo bilaogera, izay nitsikera ihany koa ireo “endrika diso fanta-bahoaka” amin'ny Maitso any Andrefana.
Tao anatin'ny tafatafa izay nataony dia naneho hevitra maro i Clinton, fa toa ity fanamarihana ity no tena niteraka fanehoan-kevitra maro indrindra:
Lazaiko aminao fa fotoana sarotra ho anay iny, satria naniry ny hiray fo tanteraka tamin'ny zava-nitranga tany Iran izahay, dia mbola manohy mitandrina ihany hoe sao hampidi-doza fiainan'olona, lasa nanambany ilay hetsika, sy nampihen-danja ny finiavany izahay. Heveriko fa raha mbola hiseho indray io toe-javatra io dia tsara ho an'ny Hetsika Maitso na ny hetsika hafa ato Iran ny manambara hoe, “Mila ny feon'ny tontolo izahay. Mila ny fanampian'izao tontolo izao ao aorianay.
Izany no nataon'ny herin'ny mpanohitra libiana, raha tsaroanareo.
Tafatafan'i Hillary Clinton tamin'ny BBC
Abulhassan Banisadr, filoha teo aloha lasa sesitany, dia nitsikera an'i Clinton [fa], ary nilaza fa tsy mitady demokrasia ho an'i Iran velively i Etazonia, fa fitondrana mpanaraka am-bokony ho solon'ny Repoblika Silamo.
Banouyesabz dia namoaka dikanteny anglisin'ilay fanehoan-kevitr'i Ardeshir Amir Arjomand, mpanolotsaina an'i Mir Hussein Mousavi, momba ny tafatafa nataon'i Clinton:
Mandeha mihoatra lavitra ny zon'olombelona ny finiavan'ny firenena vahiny
Ny hevitray dia ny hevitry ny mpitarika ny Hetsika Maitso eto Iran, Mir Hossein Mousavi sy Mehdi Karroub. Ny Hetsika Maitso aty Iran dia hetsika naniry sy manana ny fàkany voavoly lalina eto amin'ny firenenay, ao am-pon'ny vahoaka, sy ny finiavana ary ny heriny hanetsika. Hanohy hatrany hananamarika ny fahaleovantenan'ny Hetsika Maitso izahay, satria io no antoky ny herin'ny hetsikay… Tsy ilaina asian-teny akory fa raha ara-tantara, eran'izao tontolo izao, rehefa mahita firenena mijabaka amin'ny raharaha anatin'ny firenena hafa izahay, dia tsy ny hampanaja ny zon'olombelona sy ny fampiharana ny demokrasia mihitsy no tadiaviny. Amin'ny ankapobeny, rehefa misy fijabahana avy any ivelany, dia misy antony ambadika mamporisika ny fijabahana ao. Ny firenenay dia tsy anisan'ireo miankina aminà governemanta hafa.
mangataka fanampiana avy any amin'ny fitondrana amerikana hoe i Arjomand?
Raha miseho manipaka tanteraka ny fanampiana ny Hetsika Maintso avy amin'ny Etazonia i Arjomand, dia namoaka dikanteninà “telegrama Wikileaks” i Zirepoust Shahr, izay manoritra fangatahana fanampiana nataon'i Arjomand tao amin'ny ambasady Amerikana ao Torkia mba hiaro azyfony izy nandao ny firenena:
Niditra antsokosoko tao Torkia i Ardeshir fa manana fahazoan-dàlana hitoetra, frantsay, manankery. Nangataka fanampiana izy [tamin'ny governemanta Amerikana] mba hahazoany antoka fa afaka mandeha ampilaminana any Frantsa na any Etazonia. Nanazava izahay hoe ny USG dia tsy afaka manome fanampiana tsy mifanaraka amin'ny lalàna Tiorka na Amerikana, ary nanainga azy hisoratra haingana amin'ny UNHCR ho toyny mpangataka fialokalofana, torohevitra izay notsipahany fa natahotra izy sao haverin'i Torkia any Iran.
Manoratra [fa] miharo eso i Khorshid Neshan manao hoe:
Tamin'ity indray mitoraka ity indray koa dia mbola niseho ho “tompon”‘ny Hetsika Maitso i Arjomand, ary amin'ny maha-manampahefan'ny Repoblika Islamika dia nitsikera an'i Hillary Clinton… Mahavariana mihitsy hoe ireny mpomba ny fanovàna monina any amin'ireo tanan-dehibe ao Eoropa sy Etazonia ireny dia tsy ho tonga velively amin'ny fihaonana amin'ireo vondrona Iraniana mpandresy lahatra… Mazava loatra fa miaro ny tombotsoany i Etazonia, saingy ankehitriny dia efa mitovy zotra amin'ny an'ny vahoaka Iraniana ny tombontsoany… Soa ihany fa tsy nolavin'i Arjomand ity vintana ity.
Ny 27 Oktobra lasa teo, Mojtaba Vahedi, mpanolotsaina an'i Mehid Karoubi, dia nilaza tamin'ny hafatra [fa] tamin”ny Youtube avy any Washington DC izay ipetrahany, fa ny Etazonia no “tompon”‘ny fanohanana ny hetsiky ny mpanohitra Iraniana :
Persian Letters tao amin'ny RFL dia nandika ny fanambarany tamin'ny teny Anglisy:
Tamin'ny fivelarana tanteraky ny Hetsika Maitso no nilaza ny filoha Aòerika , Obama fa vonona hiresaka amin'ny Repoblika Islamika ny fireneny. Amin'ny fanatanterahana izany, Washington dia nanohana ara-tsaina ny governemanta Iraniana, izay natahotra mafy fepetra anatiny sy ny iraisam-pirenena”, hoy i Vahedi.
Nanampy i Vahedi fa raha araka ny fijeriny dia Etazonia ihany koa no mihazona ny hetsika fanoherana Iraniana mba tsy hanindry ireo mpiara-dia manohana ny famoretana, Ahitàna fanomezany fitaovana fanarahamaso an'i Tehera izany fanohanana izany.
Niantso an'i Etazonia koa izy mba hangataka ny filoham-pirenena taloha Jimmy Carter ho avy any Iran hanara-maso ny fifidianana parlemantera amin'ny volana Marsa 2012. Heveriny fa izany dia hametraka ny fitondrana amin'ny toerana sarotra. Ary nanamarika izy fa i Teheran dia naneho fanohanana sy nanaiky ny fanarahamason'i Carter an'ny fifidianana Palestiniana sy Tonisiana.
Nitsikera an'i Vahedi i Gole Ayneh ary nilaza fa izy, vehivavy Iraniana, dia mitsipaka ny fandraisana anjara vahiny ary gaga hoe mieritreritra i Vahedi fa tsy misy na inona na inona ao Iran azo avy amin'i Etazonia:
Nanome toky i Obama fa hiaro ny tombotsoan'i Amerikana fa tsy ny Iraniana… Ianao manome sosokevitra handefa an'i Carter hanara-maso ny fifidianana parlemantera! Tahaka ny odianao tsy hita ireo mpanohitra eny an-dalambe, manohitra ny teokrasia